Wararkii ugu dambeeyay roobab dabeylo watay oo ka da’aya deegaano ka tirsan Puntland.
Maleeshiyaad Hubeysan oo weerar culus ku qaaday Xabsiga Gaalkacayo dhanka Puntland,faahfaahin.
Kenya weerar lagu qaaday gaadhi Bas ah & Al-shabaab oo sheegatay gacanta weerarka.
Akhriso:-Imaaraadka carabta oo shaaciyey inaysan dooneyn iska hor imaadka Soomaaliya xili xiisad huursan tahay-Warbixin
Xasan Sheekh oo Dowladda Farmaajo uga digay muddo kororsi duruufo loogu soo gabaday-Akhriso
Dagaal culus oo ka dhex qarxay laba maleeshiyo beeleed Gobolka Mudug & khasaare lasoo sheegayo.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo lagu dhaggan yahay & Culimada Al-shabaab oo fatwo kasoo saaray hadalkiisii xili uu is difaacayo.
Daawo:-CC Shakuur oo Dowladda Soomaaliya ku eedeeyey dhiirin galin argagaxiso xili Xasan Daahir Aweys ku tilmaamay kufrnimo-Video
Daawo:-Warbaahinta gudaha Soomaliland oo soo bandhigtay xiisadda siyaasadeed ee Hargeysa.